အသင်းဝင်များ ခင်ဗျား -
မြန်မာနိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်း အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ (၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၅ ခုနှစ်)မှ အသင်းဝင်များအားလုံး ကာယသုခ၊ စိတ္တသုခနှစ်ဖြာ ပြည့်စုံပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်။
အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို အသင်းဝင်များထံ အသိပေးနိုင်ရန် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်အတွင်း သတင်းလွှာ အမှတ်စဉ် (၁/၂ဝ၁၄) နှင့် (၂/၂ဝ၁၄) တို့ကို အသင်းဝင်များထံ ဖြန့်ဝေခဲ့ပါသည်။ ယခု ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်အတွက် အမှတ်စဉ် (၁/၂ဝ၁၅) ကို ပေးပို့ပါသည်။
အသင်း၏ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ - ၂၈ ရက်များတွင် မန္တလေးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမတွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီး အသင်းဝင် (၄၃၈) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
လက်ရှိ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ (၂ဝ၁၃ - ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်) ၏ သက်တမ်းသည် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ကုန်ဆုံး မည် ဖြစ်ရာ အသင်းအခြေခံ စည်းမျဉ်း အပိုဒ် ၃၂၊ အပိုဒ်ခွဲ (ဂ) အရ (၁၃) ကြိမ်မြောက်ညီလာခံကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက် (စနေနေ့) နှင့် ၆ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) တို့တွင် ရန်ကုန်မြို့ တက္ကသိုလ် စိန်ရတုခန်းမတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသင်းဝင်များ အင် တိုက်အားတိုက် တက်ရောက်ကြပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ (၂ဝ၁၆ - ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်) ဖွဲ့စည်းရန်
အသင်း၏ (၁၃) ကြိမ်မြောက် ညီလာခံတွင် အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးပါ အလုပ် အမှုဆောင်အဖွဲ့ (၂ဝ၁၆ - ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်) ကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်ဖြစ်ရာ အလုပ်အမှုဆောင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးကော်မတီ (၂ဝ၁၅ ခုနှစ်) ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။
စဉ် အမည် တာဝန်
၁။ ဒေါက်တာသန်းလှ ဥက္ကဋ္ဌ၊
ညွှန်/မှူး (ငြိမ်း)၊ မွေး-ကုဦးစီးဌာန
၂။ ဒေါက်တာခင်လှိုင် အဖွဲ့ဝင်
M.D, Walco Dairy Co., Ltd.
၃။ ဒေါက်တာဝါဝါဟန် အဖွဲ့ဝင်
ဒု-ညွှန်/မှူး (ငြိမ်း)၊ မွေး-ကုဦးစီးဌာန
၄။ ဒေါက်တာလှမြင့် အဖွဲ့ဝင်
မန်နေဂျာ (ငြိမ်း)၊ မွေး-စား-နို့လုပ်ငန်း
၅။ ဒေါက်တာ သိန်းအောင် အဖွဲ့ဝင်
လ/ထ ညွှန်မှူး (ငြိမ်း)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန
အလုပ်အမှုဆောင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး ကော်မတီ (၂ဝ၁၅ ခုနှစ်) သည် အသင်းဝင်များထံ အလုပ်အမှုဆောင် လောင်း အမည်စာရင်း တင်သွင်းလွှာပုံစံကို စာတိုက်မှ ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရန် ဆန္ဒရှိသော အသင်းဝင်များသည် အခြေခံစည်းမျဉ်းအပိုဒ် ၂ဝ၊ အပိုဒ်ခွဲ (ခ) ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ပါက အမည်စာရင်း တင် သွင်းလွှာကို ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုး၍ အလုပ်အမှုဆောင်ရွေးချယ် တင်မြှောက်ရေးကော်မတီ (၂ဝ၁၅ ခုနှစ်) သို့ (ပေးပို့သည့်စာတွင် ပါရှိသည့် သတ်မှတ်ရက်အမီ) တင်သွင်းရပါမည်။
လက်ရှိ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် အသင်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သစ်ထံ စနစ်တကျ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပြီး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသည့် အလုပ်အမှုဆောင်သစ်များတွင် တက်ကြွ ပြီး အသင်းကြီး တိုးတက်လာစေရန် စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ကြမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များပါရှိရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမည်စာရင်း တင်သွင်းကြပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာဆည်းပူးရေး
အသင်းမှ Continuing Education အစီအစဉ်အဖြစ်Recent Advances in Veterinary Practice No. 1,2and3တို့ကို ကျင်းပခဲ့ပါ သည်။ ကျင်းပခဲ့သည့် No. (1) (2) နှင့် (3) တို့ကို သတင်းလွှာအမှတ်စဉ် ၁/၂ဝ၁၄ တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ OIE (Office International des Epizooties)၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနနှင့် အသင်းတို့ ပူးပေါင်းပြီး OIE Information Seminar for Practicing Veterinarians ကို ၁၈-၆-၂ဝ၁၅ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ Summit Parkview Hotel ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ OIE မှ Dr. Scott Zaari, Dr. Pennapa Mataysmpeng နှင့် Dr. Ronello Abila တို့က ဟောပြောပြီး တက်ရောက်သူ (၉၆) ဦးက Group (6) ခုခွဲပြီး Workshop on Developing Partnerships to Strengthen National Veterinary Services ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်းနှင့် World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) တို့ ပူးပေါင်းပြီး Continue Education အတွက် Recent Advances in Veterinary Practice No. (4) ကို ရန်ကုန်မြို့၊ အလုံလမ်း Summit Parkview ဟိုတယ်တွင် ၂ဝ-၉-၂ဝ၁၅ ရက်၌ Essential Concepts and Techniques for Abdominal Surgery သင်ကြားပို့ချခြင်းနှင့် ၂၁-၉-၂ဝ၁၅ ရက် နှင့် ၂၂-၉-၂ဝ၁၅ ရက်များတွင် အသင်းတည်ရှိရာ ရန်ကုန်မြို့၊ အနောက်ကြို့ကုန်း ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းရှိ မြန်မာ နိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် မြေညီထပ်တွင် လက်တွေ့ ခွဲစိပ်ခြင်းတို့ကို Small Animal Practitioner (၇ဝ)ဦးအား United Kingdom မှ Dr. Arthur House က ဦးစီးပြီး သင်ကြားပို့ချမည် ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာတိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် World Veterinary Day နှင့် World Rabies Day အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုများ အသင်းမှ နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် World Veterinary Day အထိမ်းအမှတ် ဟောပြောပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၊ သီရိအဏ္ဏဝါခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၈) ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် World Rabies Day အတွက်လည်း အထိမ်းအမှတ် လှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အသင်းမှ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် Website ၏ လိပ်စာမှာ http://www. myanmarveterinaryassociation.org ဖြစ်ပါသည်။ ဝင် ရောက်ကြည့်ရှုပြီး လိုအပ်သည့် အကြံပြုချက်များ၊ လိုအပ်ချက်များ ပြင်ဆင်ပေးခြင်းတို့ကို MVA Website ၏ Contact Us - Message box တွင် ရေးသားပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
လက်ရှိအသင်းဝင် အင်အားမှာ ရာသက်ပန်အသင်းဝင် ( ၆၁၉ ) ဦး၊ ၂ဝ၁၃ - ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် အသင်းဝင် ( ၁၇၁ ) ဦး၊ စုစုပေါင်း ( ၇၉ဝ ) ဦး ရှိပါသည်။ အသင်းဝင်အင်အား တိုးတက်ရေးအတွက် အသင်းဝင်သက်တမ်း ပြတ်တောက် နေသူများ၊ အသင်းဝင်ခွင့် မလျှောက်ထားရသေးသူများ အနေဖြင့် အသင်းဝင်ခွင့် လျှောက်ထားကြပါရန် နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
(၁၃) ကြိမ်မြောက် ညီလာခံကျင်းပရေး
(၁၃) ကြိမ်မြောက် ညီလာခံကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပသည့်အခါ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပွဲ၊ မွေးမြူရေးအစာ၊ ဆေးဝါးနှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ တင်သွင်းထုတ်လုပ်၊ ဖြန့်ဖြူးသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ပြခန်းများ၊ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲနှင့် ညစာစားပွဲတို့ ပါဝင် မည် ဖြစ်ပါသည်။
ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပွဲအတွက် စာတမ်းများကို အသင်းဝင်များမှ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၊ (၃ဝ) ရက် နောက်ဆုံးထား ပေးပို့ကြပါရန်နှင့် myanmarveterinaryassociation@gmail.com, dr.tintinmyaing@ gmail.com နှင့် soemin1070@ gmail.com တို့သို့ ပေးပို့ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ညီလာခံ အထိမ်းအမှတ် ထုတ်ဝေမည့် မြန်မာ့မွေးမြူရေးစာစောင် အတွက်လည်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာဆောင်းပါး၊ ဗဟုသုတ ပညာပေးစာမူများကိုလည်း အထက်ဖော်ပြပါ e-mail များသို့ဖြစ်စေ၊ အသင်းရုံးသို့ဖြစ်စေ ပေးပို့ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ညီလာခံ ကျင်းပသည့်ကာလအတွင်း Batch အလိုက် ဆရာကန်တော့ပွဲများ ပြုလုပ်ကြမည်ဆိုပါက ဥက္ကဋ္ဌ (ဖုန်း - ဝ၉-၈၆၂ ၃ဝ၂၇) နှင့် အတွင်းရေးမှူး (ဖုန်း - ဝ၉-၅၁၈၈ ၂၉၈) တို့ထံ ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။